Qaphela, abathandi bezematriki eziphakamileyo. Abachasi besikolo samabanga aphezulu, unokuphulaphula, nabo. Ingaba ufunda isifundo sakho sematriki esilandelayo esikolweni kwaye ungabonakali ukuba ukhonkcole iingcamango kunye neencwadi zokufunda, okanye ungumfundi wesikolo okanye umfundi ongenamkeleki efuna uncedo oluninzi lweematriki, unokufumana ncinane kulezi ndawo ezihlanu. Banokukunceda ukunyusa i-geometry yakho, i-algebra, i-trigonometry kunye nezakhono zokubala ukuya kutsho. Omnye unokubonelela ngeprojekthi yocwaningo oluhambelana nezibalo kunye neengcamango ezintle zezesayensi!
Ngokubambisana nezichazi zezakhono zamatriki, ezimbalwa zale viza zinika iipuzzles, imidlalo, kunye neendlela zokunceda ukucacisa ezo ngcamango ezinzima, ezigqibeleleyo kuwo wonke uhlobo lwabafundi ngaphandle. Ulungele ukungena? Thatha la mawebhusayithi eklanyelwe ukuthatha loo mbono yeemathematika kwi-konkrithi.
Unokuzama kwakhona ezi zilingo ezipholileyo, zasekhaya zenzululwazi !
Iimidlalo zematriki zibonakala ziphazamisa apha ekuqaleni, kodwa xa uzidlala ngokwenene, zivavanya izakhono zakho ngendlela eqinisekisa ukuba awuyi kuphuma kwikhompyutha ngokukhawuleza. A ndi kholelwa? Yiya kwi "Game Trouble" umdlalo weFiziki kwaye zama ukuyeka ukudlala xa ufika kwiNqanaba 10. Akunakwenzeka. Ufuna ukuqhubeka uzama. Lezi zibalo zemibuzo zivavanya izakhono zakho zeemathematika ngendlela ebonakalayo. Ukususela ekugqoke iindlovukazi ngokuphindaphinda ukugcina iibhloko eziluhlaza ezihambayo esibhakabhakeni ngezakhono zakho ze-physics, izakhono zakho zamatriki, kuzo zonke iindawo, ziya kuncatshiswa ngendlela engumlutha ngokupheleleyo. Kaninzi "
IMathematika kaMorons Njengaye
IMathematika kaMorons Njengaye. IMathematika kaMorons Njengaye
Le sayithi yaqalwa yiprogram yeCock Quest, ngoko abafundi abanjengawe bakwenza kwaye bayigcina. Oko akuthethi ukuba iwebhusayithi leyo yinto engamangalisa kakhulu kunokuba ngaba iqela lootitshala belibeke ndawonye. Isiza sinikeza uncedo lweemathematika zobutyebi. Ngakwesokunxele kwiphepha, uza kufumana "ikholomu". Esi sabelo sinceda ukuxubusha kwiingcinga onokungayifumana okokuqala kwisikolo. Ngakwesokunene sephepha, ufumana "ikholwano", apho uza kufumana iibhodi zamyalezo ukubuza imibuzo, uluhlu lweefomula, imibuzo kunye nezixhumanisi zezibalo ze stellar. Kaninzi "
Le webhsayithi yenzelwe ootitshala bezibalo: IBhunga leSizwe lootitshala beMathematika. Musa ukukhohliswa ekucingeni ukuba kuya kuba yinto evelelekayo yokufunda, nangona kunjalo. Aba titshala bayazi ukuba benza ntoni. Ngummangaliso, ha Ngamanye amaxesha ootitshala bayayiqonda indlela yokunceda abafundi. Kule webhusayithi, ungakhetha ukuba ufunde ngeentlobo zemingeni okanye izibalo zemathematika. Nantsi into oyenzayo:
Khetha umngeni okanye umqondo wezibalo.
Ukuzama ukuphendula ingxaki evezwe yedwa.
Ukuba unamathele, iya ku "Qalisa" ukunika inkcazelo malunga nokuba ungayisombulula phi okanye nqakraza kwi "Hint" ukunika inkcazelo.
Cofa kwi "Phendula" ukujonga umsebenzi wakho.
Imingeni ivela kumalinganiso olinganayo kunye nemisebenzi ukuba kunokwenzeka kunye neenkcukacha ngejometri kunye nokulinganisa phakathi. Kaninzi "
IThala leNcwadi kaZwelonke yeMigqaliselo eViweyo
Le webhsayithi yiphupha lomfundi wesigxina lizaliseka. Kunzima kubafundi bezikolo eziphakamileyo abafuna ukuva, ukuqonda kunye nokunyuka ukuba bafumane iingcamango ezinzima zezibalo kwiintloko zabo ngezinye iindawo, ngokukodwa kwisimo esingenakuhlangabezana neemfuno zabo zokufunda. Ungomnye wabafundi? Ezi zixhobo zonyango zinganceda! Banikezela iinkcazo zeengcamango zamatriki ngendlela yezandla. Ungadonsa ubude kwi-abacus ye-intanethi, sombulula iipuzzle ezithakazelisayo ngokuhambela macandelo kwaye wenze iigrafu, iipatheni kunye namathambo ukuhlalutya nokuhlola idatha. Iimpawu zonyango zivumela ukuba ubone ngokucacileyo ukuba imathethini ithetha emva kwe-equation, e-oh-inceda xa unamathele. Kaninzi "
Getty Images | UkuCoca kweMveliso
Ukuba ngaba ngumntwana wakho okanye umnyaka ophezulu kwaye unikwe umsebenzi othabisayo wokuza neprojekthi yophando-based, kodwa ulahlekelwa ngokupheleleyo malunga nendlela oya kuqala ngayo, uze ukhangele kule website apha ngasentla. Kwiwebhsayithi, okuyiyo nje uluhlu lweengcamango, uya kufumana ubutyebi beeprojekthi zeeprojekthi zemfundo ephakamileyo ezifanelekileyo eziphambili kwiprojekthi efanelekileyo yemveli yesayensi okanye iphrojekthi ephezulu. Nazi izibini:
Mazes: Ngaba kukho i-algorithm yokuphuma kuma-2-dimensional mazes? Kuthiwani malunga no-3-ububanzi? Khangela iimbali zamathambo. Unokwenza njani malunga nokufumana umntu olahlekileyo kwi-maze (2 okanye 3 ubukhulu) kunye nokungahambi ngokukhawuleza? Bangaphi abantu onokufuna ukuba bamfumene?
I-Kaleidoscopes: Yakha i- kaleidoscope . Phanda imbali yayo kunye neemathematika zeem symmetry.
Ingxaki yegalari yobuGcisa: Iyiphi inombolo encinane yabalindi abafunekayo ukuba babukele yonke imifanekiso egalari? Abagcini baxhomekeke kwiindawo ezithile kwaye bebonke kufuneka babe nomgca ohambelana naso kwiindawo zonke kwiindonga.
Iindaba ezipheleleyo ezivela kumaziko aPolitiki anamandla
5 Iinkampani ezinkulu zijongene nokucwaswa kobuhlanga
Kutheni amaMelika ayenqoba iMfazwe yaseMexico naseMelika?
IQumrhu Elilawulayo likaMongameli Obama
Kuthetha ukuthini ukudibana nomqondiso weZodiac nge-Element?
5 Iimeko Xa Ukulwa Kwentlupheko Kuyingxaki